Su'aal ku saabsan kaadi ku dhaga (BPH)
Author Topic: Su'aal ku saabsan kaadi ku dhaga (BPH) (Read 21095 times)
« on: May 15, 2008, 06:37:29 PM »
salaan kadib .
marka ugu horeysa waxaan dhamaan dhakhaatiirta somaliyeed ee noo furtay ama inoo sameysay WEB. somalidoc aan ugu hanbalyeynayaa horu marka wanaagsan ee ay gaadhsiiyeen aqoontooda una caawinayaa inta u baahan caawimaada .
Anigoo dhihi kara dadka sida khaaska uu faaido lama huraan ah u yahay kalkaaliya yaasha anigoo kale ah .
waxaana dhihi lahaa ALLE haidinka ajirsiiyo
Hadaan u gudbo su aasha aan qabo ayaa ah
1: WAA MAXAY BPH
2: MIYAY JIRAAN WAX LA DHIHI KARO WAA AY SABABTAA
3: MA LEE YAHAY DAAWO
4: QALIIN KIISA WAA IMASA NOOC
5: MA KANSARBAA(CA)
6: MUXUU QOFKU KU GARAN KARAA INUU QABO XANUUNKAAS .
Anigoo doonaya inaan helo aqoon ahaan dhamaan wax yaabaha ku saabsan BPH ama wax raga inta badan da'da ah ku xidha kaadida
AAKHIRU KALAAM shukran
Re: Su'aal ku saabsan kaadi ku dhaga ( BPH)
« Reply #1 on: May 16, 2008, 06:15:54 PM »
Borastayt waa qanjir la xirira galmada oo laga helo ragga. Qofka weyn oo lab ah qanjirku wuxuu le’ekaanayaa qiyaasta iniinta miraha. Wuxuu ku yaallaa kaadi haysta hoosteeda, salka guska wuxuuna waxyar ka horeeyee saxara-mareenka (malawadka).
Borastaytku wuxuu leeyahay god dhuuban oo dhexda ku yaalla. Tuubada (kaadimareenka) faaruqisa kaadida oo ka timaada kaadi haysta ayaa marta godkaan markay ku socoto dhamaadka guska.
Borastaytka markuu bararo wuxuu keenaa cadaadis uu ku sameeyo tubada (kaadimareenka) faaruqisa, kaasoo qofku isku arki karo calaamadahaan hoos ku qoran, dhibaatadaan ayaa lagu magacaabaa (Benign Prostate Hyperplasia) oo ah macnaheeda "Bararka prostaytka ee aan kansarka aheyn"
Sidee ku ogaanayaa inaan qabo BPH?
• Inaad ku dhibaatooto bilaabida kaadinta, khaasatan markaad degdegsan tahay.
• Inaad ku dhibaatooto joojinta kaadida.
• Inay kugu qaadato waqti inaad kaadido, sababtoo ah kaadi marenka ayaa daciifa, ama marna waa istaagaysa marna waa bilaabmaysaa kaadidu.
• Kaadida ayaa da’aysa markaad dhamayso kaadida ka dib.
• Aadida musqusha oo badan maalinimada, in kastoo aanay jirin kaadi badan oo samaysmaysa.
• Habeenkii oo aad kacdo si aad u kaadidu, halka aad iska seexan jirtay. Taas ayaa kaa dhigaysa qof daalan oo aan caadi ahayn.
• Adoo mar walba raba inaad degdeg u gasho musqusha ama u kaadido.
• Dareemida in aadan weli kaadidii dhamayn, in kastoo aan waxba kaa soo baxayn.
• Kulayl ama xanuun ay kugu qabanayso kaadidu markaad kaadinayso.
• Marmarka qaarkood, dhiig ayaa ku jira kaadida. Arrintaan waa in mar walba dhakhtar eegaa.
Haddii aad qabto dhibaatooyinkaan kuwa ka mid ah, arag dhakhtarkaaga. Ha u qaadan inay qayb ka yihiin gabowga ama is badal cimillo—daawaynta saxda ah ayaa ku caawimi karta.
Maxaa keena BPH?
Sidee loo baaraa BPH?
Digital rectal examination (baaritaan qofka malawadka lagaga samaynayo): Dhakhtarku wuxuu gelinayaa far galoof ku jiro saxaramareenkaaga (malawadka) si uu u dareemo inta uu le’eg yahay brostaytka, qaabka iyo sida uu u adag yahay ama u jilicsan yahay borastaytku.
Prostate specific antigen test (PSA): Kani waa dhiig laga qaado qofka si loo eego waxaa loogu yeero PSA, kaas oo uu sameeyo borastaytku. Haddii dhiigu aad u sarreeyo, waxaa laga yaabaa inaad qabto borastayt kansar—laakiin dhakhtarku wuxuu samayn doonaa baaritaano badan si uu u xaqiijiyo.
Biopsy (cad lagaa gooyo si loo baaro): Haddii baaritaankaaga PSA-gu uu yahay mid aan caadi ahayn (digital rectal examination), waxaa laga yaabaa in dhakhtarku kuu xawilo qof ku takhasusay qaybtaan (urologist). Dhakhtarkaan takhasuska ahi wuxuu soo jeedin doonaa in cad lagaa gooyo, waxaana la gelinayaa malawadka si loo hello meello aan caadi ahayn oo k amid ah borastaytka. Sambalada (badanaa lix ama ka badan) oo ka mid ah borastaytka ayaa loo diraa sheybaar si baaritaan siyaada ah loogu sameeyo.
Sidee loo daaweeyaa BPH?
Qaliin ayaa laga yaabaa in la isticmaalo si loo gooyo qayb borastaytka ka mid ah, si loo joojiyo inay riixdo kaadi mareenka. qeybaha qaliinka waxaa ka mid noqon kara in la adeegsado qalab lagaliyo tubada kaadi mareenka illaa laga gaarayo borostaytka kadib cad yar laga gooyo si cadaadiska kadai mareenka ku hayo u yaraado, ama in la weyneeyo dhexroorka tubada kaadi mareenka, ama in la deegsado qaliin furan ama laser.
Haduu jiro caabuqid borostaytka ah Kan badanaa waxaa lagu daweeyaa antibaayootikis.
AKHRISO DHIBAATOOYINKA KALE EE QANJIRKA BOROSTAYTKA: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,2119.0.html
AKHRISO KANSARKA QANJIRKA BOROSTAYTKA: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,749.0.html
AKHRISO MACLUUMAAD DHEERI AH: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,3162.0.html
Hadii aad qabto su'aalo dheeraad ah iigu soo dir halkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php/board,31.0.html
Re: Su'aal ku saabsan kaadi ku dhaga (BPH)
« Reply #2 on: January 04, 2016, 10:19:19 AM »
waxaa jirta mararka qaaar markaan musqusha aado ee aan kaadiyo hadana markaan soo kaco waxaan dareeemayaa iney aad moodo innuu hadhaa jiro mararka qaar dib ayaan ugu laabtaa
su'aasha kale oo kamid aha dhaqanka somalida badhida idaha waxay ka aaminsan yihiin iyo caafimaad ahaan ba dhibaatadeeda
« Reply #3 on: January 09, 2016, 04:01:52 PM »
Markaa ka soo kacdo musqusha oo aad dareemayso inuu haraa jiro waxaa kaloo keeni karo, haddii ibta kaadida ay ciriir tahay oo kaadida si sahlan uga soo faaruqi la'dahay kaadi heesta.
Ama waxaa kaloo keeni karo haddii caabuq kaa heesto kaadi heysta laftirkeeda.
Inkastoo da'daada in aad noo sheegto haboonayd, laakiin dhakhtar la xiriir si loo ogaado dhibka meesha ay tahay.
Mida ku saabsna barida idaha, waxaan horay uga diyaarinay qoraal ee ka akhriso halkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,5927.0.html
« Reply #4 on: January 10, 2016, 03:54:13 PM »
Asc.dhaqtar aad ayaad u mahadsantahay Sida aad noogu faaidaynayso.
Waxaan qabaa sual dabasocota mowduucan dhamaan calaamadaha aad sheegtay iyo cuncun maqaarka weliba xaga hoose ee xubinta taranka markii ay soo qabato kaadi aabahay ayaa qabaa waan 62 jir lkn hada waxaan joognaa India. Alx. PSA Waa 1.5, gacantane wuu ku fiiriyey wana yaryahay. Dawo ayuu noo qoray alx. Isbedel ayuu La kulmay oo hada 2 jeer ayuu kacaa habeenkii lkn suaashayada waxay tahay cuncunka iyo kaadida oo weli ku yar socodkeeda, iyo tistisleynta oo aanan dhamaanaynin. Marka waxaan doonayaa taladaada si aan ugula laabta jawaab celinta dhaqtarka.
« Reply #5 on: January 13, 2016, 11:56:52 AM »
Waxaa dhici karata in tubada kaadida ka soo qaado kaadiheysta oo banaanka u soo saarto ay cillad ka jirto taasoo ka dhalan karto inuu ciriiri noqday ama cillad kale ay ka jirto.
Waxaa kaloo suuragal ah afka kaadiheysta in uu daciif noqday ama kaadiheysta ay yaraatay awoodii ay kaadida kugu celni lahayd.
Ma jiraan baaritaan la yiraahdo "MCU" oo la idiin diray oo lagu ogaan karo cilaldahaas?
Views: 8570 August 13, 2010, 03:34:13 PM
Views: 13818 October 27, 2012, 09:40:12 PM
Views: 13170 September 04, 2011, 04:19:01 AM
Views: 11963 October 02, 2010, 08:11:06 AM
Views: 32715 February 24, 2011, 10:54:29 AM